အင်္ဂါနေ့, မတ်လ 3, 2020 အင်္ဂါနေ့, ဒီဇင်ဘာလ 15, 2020 Douglas Karr
အွန်လိုင်းစီမံကိန်းစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်များသည်လူမှုရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုပလက်ဖောင်းများအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲသွားပြီးလှုပ်ရှားမှုစီးဆင်းမှုများ၊ လုပ်ငန်းတာဝန်များ၊ အချိန်ဇယားဆွဲခြင်း၊ ၎င်းသည်လျင်မြန်စွာတိုးတက်နေသောစက်မှုလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျနော်တို့အတွက်ထိပ်တန်းကစားသမားကိုဖေါ်ထုတ်ရန်ကြိုးစားခဲ့သည် စီးပွားရေးလူမှုဆက်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်း ဒီမှာစျေးကွက်!
Azendoo - သင်၏အဖွဲ့၏လုပ်ငန်းကိုတစ်နေရာတည်းမှစီစဉ်ခြင်း၊
ဇော် - သင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစဉ်များကိုရိုးရှင်းစေရန်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိသောလုပ်ငန်းအသွားအလာပလက်ဖောင်း။
Bloomfire ပေါ့ - Bloomfire ၏ဗဟုသုတပါ ၀ င်မှုပလက်ဖောင်းသည်အဖွဲ့ ၀ င်များအားသင်၏အဖွဲ့အစည်း၏စုပေါင်းအသိဥာဏ်ကိုရယူရန်နှင့်ပံ့ပိုးရန်လုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုပေးသည်။
မင်္ဂလာပါ အေးဆေးတည်ငြိမ်စွာနှင့်ထိန်းချုပ်မှုခံစားရရန်သင်၏စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအဖွဲ့မှအသုံးပြုမည့်အလွယ်ဆုံးစီမံကိန်းပူးပေါင်းမှုဆော့ဖ်ဝဲဖြစ်သည်။ ကုမ္ပဏီပေါင်း ၄၂၈ ခုမှယုံကြည်စိတ်ချရသည်။
Chanty - ရိုးရှင်းသော AI-powered အဖွဲ့သည်စကားပြောခန်း။ လုံခြုံတဲ့အကန့်အသတ်မဲ့စာတိုပေးပို့ခြင်းကိုရယူပါ အခမဲ့ အစဉ်အမြဲ။
Cisco သည် Webex အဖွဲ့များ - အလုပ်ကိုရှေ့သို့ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ရန်နှင့်ဘဝကိုရိုးရှင်းစေရန်သင်အသုံးပြုသောအခြားကိရိယာများနှင့်ချိတ်ဆက်ရန်သင်လိုအပ်သည့်အဖွဲ့ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်မှုအားလုံး။
အဆက်အသွယ် - သင်၏ဖောက်သည်များနှင့်ဖောက်သည်များနှင့်ရင်ဆိုင်ရသောအဖွဲ့များကိုယနေ့အဖြူရောင်တံဆိပ်တပ်ထားသောပလက်ဖောင်းနှင့်မိုဘိုင်းအက်ပလီကေးရှင်းကိုလုံခြုံသောထိတွေ့မှုကိုပေးအပ်ပါ။
Fleep - ဖိုင်ဝေမျှခြင်းနှင့်အလုပ်များကိုမက်ဆေ့ခ်ျပို့ခြင်းနှင့်ပေါင်းစပ်ခြင်း၊ Fleep တွင်သင့်အဖွဲ့၏အလုပ်ကိုစိတ်ကူးမှသည်အဆုံးအထိညှိနှိုင်းရန်သင်လိုအပ်သမျှရှိသည်။
သိုးစုကို - Flock သည်ဆက်သွယ်ရေးနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုလွယ်ကူစေသည်
Flowdock - စကားပြောဆိုမှုများ၊ အလုပ်ပစ္စည်းများနှင့်ကိရိယာများအားလုံးကိုတစ်နေရာတည်းတွင်ပြုလုပ်သည်။ အလုပ်များကို ဦး စားပေး၊ ပြproblemsနာများကိုဖြေရှင်းပါ၊ အဖွဲ့များ၊ နေရာများနှင့်အချိန်ဇုန်များအလိုက်ရှာဖွေ။ စုစည်းပါ။
ဂျစ် - ကုမ္ပဏီများအတွင်း၌ Jive ပလက်ဖောင်းသည် ၀ န်ထမ်းများ ချိတ်ဆက်၍ ပူးပေါင်းလုပ်ကိုင်သည့်ဗိုင်းရပ်စ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာလူမှုကွန်ယက်များကိုပိုင်ဆိုင်သည်။
JoinCube - All-in-one ပူးပေါင်းကိရိယာတစ်ခု၊ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းနှင့်သိမြင်နားလည်မှု။
MangoApps တစ် ဦး All-In-one န်ထမ်းဆက်သွယ်ရေး & ပူးပေါင်းပလက်ဖောင်း။
Mattermost - အိုင်တီထိန်းချုပ်မှုအောက်ရှိအခြေခံအဆောက်အအုံများသိုမဟုတ်သိုမဟုတ်သောအခြေခံအဆောက်အအုံများကိုသိုလှောင်ထားသည့်လုပ်ငန်းအဖွဲ့နှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့်စာတိုပေးပို့ခြင်း။
မိုက်ကရိုဆော့ဖအသင်းများ - စကားပြော၊ တွေ့ဆုံ၊ ခေါ်ဆို၊ ပူးပေါင်းပါ၊ အားလုံးတစ်နေရာတည်းတွင်။
မိုက်ကရိုဆော့ဖ Yammer - ပိုမိုကောင်းမွန်သောဆုံးဖြတ်ချက်များချမှတ်နိုင်ရန်သင်၏အဖွဲ့အစည်းအနှံ့ရှိလူများနှင့်ဆက်သွယ်ပါ။
Monday.com - သင်အဖွဲ့၏တိုးတက်မှုကိုခြေရာခံနိုင်ရန်ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်ပြီးသင်မည်သည့်နေရာတွင်ရှိနေသည်ကိုသင်အမြဲသိနိုင်သည်။
စင်မြင့် - ခေါင်းဆောင်များယုံကြည်မှုနှင့် ၀ န်ထမ်းများအလုပ်လုပ်ရခြင်းကိုနှစ်သက်သောစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်သောအလုပ်စီမံခန့်ခွဲမှုဖြေရှင်းချက်။
ပရိုတွန် - အဘယ်သူမျှမ။ လုံခြုံသောဝန်းကျင်၌ဆက်သွယ်ရေးနှင့်ပူးပေါင်းမှုအတွက် ၁ ခု။
Rocket.chat - သင်၏ဆက်သွယ်မှုကိုထိန်းချုပ်၊ သင်၏အချက်အလက်များကိုစီမံခန့်ခွဲပါ။
ရီဗာ - app တစ်ခုတည်းဖြင့်သင်၏အဖွဲ့ပူးပေါင်းမှု။
Salesforce စကားများသော - စီးပွားရေးလူမှုကွန်ယက်ပေါ်ရှိသင်၏ကုမ္ပဏီမှကျွမ်းကျင်မှု၊ ဖိုင်များနှင့်အချက်အလက်များကိုမျှဝေပါ။
SAP SuccessFactors များ Human Experience Management (HXM) Suite - စီးပွားရေးရလဒ်များတိုးတက်စေရန် ၀ န်ထမ်းများ၏ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကိုဖန်တီးပါ။
ပျင်းရိ - စကားလက်ဆုံပြောဆိုမှုကိုအီးမေးလ်အတွက်အသုံးဝင်သောရွေးချယ်စရာ Slack တွင်ထားပါ။
Swabr - ကုမ္ပဏီများအတွက်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်း
ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း - ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု၊ မြင်သာမှု၊ တာ ၀ န်ခံမှုနှင့်နောက်ဆုံးတွင်ရလဒ်များကိုတိုးတက်စေရန်အထောက်အကူပြုသောလုပ်ငန်းစီမံချက်ကိရိယာတစ်ခုသည်အဖွဲ့လိုက်လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်သည်
သဲကန္တာရ - ဆက်သွယ်ပါ။ ပူးပေါင်းပါ။ မျှဝေပါ။
လိမ် - Twist သည်နှစ်ပေါင်းများစွာကြာသော်ပင်အကြံဥာဏ်များကိုဆွေးနွေးခြင်း၊ အသစ်ပြောင်းခြင်းများပြုလုပ်ရန်နှင့်လူတိုင်းပြန်လည်ရည်ညွှန်းနိုင်သောအသိပညာများကိုတည်ဆောက်ရန်အတွက်သင်၏အဖွဲ့အားစနစ်တကျအချက်အချာကျစေသည်။
သံကြိုး - မျက်မှောက်ခေတ်ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်မှုသည်အဆင့်မြင့်သောလုံခြုံရေးနှင့်သာလွန်ကောင်းမွန်သောအသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံနှင့်ကိုက်ညီသည်။
ရှုံ့ချသည် ဖြန့်ဝေသောအသင်းများကိုအလျင်အမြန်၊ လွယ်ကူစွာနှင့်အကျိုးရှိစေမည့်အွန်လိုင်းပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
Tags: ဇော်ပိုင်ဇော်ပိုင်မီးတောက်စကားများအဆိုးမြင်ကလပ်collabspot ပျဉ်ပြားမင်္ဂလာပါပန်းချီဆရာခန်းမjiveမင်္ဂလာပါသရက်စိတ်ဓာတ်ဆက်သွယ်မှုoogwave ဖြစ်သည်ပိုလန်နာမ်သှေးခုနျခွငျးကျူရှင်refinderရောင်းသူရောင်းသူအပင်ရည်အောင်မြင်သောအချက်များလူမှုရေးလူမှုကွန်ယက်အောင်အောင်မြင်မြင်swabrရိုးရာYammer
အဘယ်ကြောင့် eCommerce စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတိုင်းသည်စျေးနှုန်းချိုသာသောကိရိယာတစ်ခုလိုအပ်သနည်း။
27:2012 pm တွင်သြဂုတ်လ 4, 28
27:2012 pm တွင်သြဂုတ်လ 5, 38
မင်္ဂလာပါ @ facebook-1097683082: disqus! ဤပလက်ဖောင်းအတော်များများတွင်တစ်ခုနှင့်တစ်ခုထပ်နေသည်မဟုတ်သောပေါင်းစည်းမှုနှင့်အင်္ဂါရပ်များရှိသည်။ ကုမ္ပဏီများအတွက်ပထမ ဦး ဆုံးဆော့ဖ်ဝဲပလက်ဖောင်းကို ၀ ယ်ရန်ခက်ခဲပြီး၎င်းနှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်ရန်သူတို့၏အတွင်းပိုင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကိုပြုပြင်ရန်ကြိုးစားသည်။ ဒါကပုံမှန်အားဖြင့်ပျက်ကွက်စေပါတယ်။
သင်၏ဖြစ်စဉ်များမတိုင်မှီနှင့်ပြီးနောက်အပါအဝင်သင်၏အတွင်းပိုင်းဖြစ်စဉ်ကိုမှတ်တမ်းတင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုပါသည်။ ထို့နောက်သင်ပုံမှန်အားဖြင့်အနီးကပ်ကိုက်ညီသောပလက်ဖောင်းတစ်ခုကိုတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ သင်သည်အီးမေးလ်ကိုများစွာအသုံးချပါကအီးမေးလ်တုံ့ပြန်မှုများကိုဖတ်ရှုပြီးအကန့်အသတ်ဖြင့်ထိန်းချုပ်ထားသည့်အီးမေးလ်မှအသိပေးချက်များကိုထုတ်ပေးသောပလက်ဖောင်းသည်အလုပ်ဖြစ်လိမ့်မည်။ သငျသညျ Salesforce ကိုအသုံးပြုလျှင်မူကား ... ထို့နောက်သင်အထူးသပေါင်းစပ်ကြောင်းတ ဦး တည်းကိုအသုံးပြုချင်ပေမည်။ မျှော်လင့်ပါတယ်။
27:2012 pm တွင်သြဂုတ်လ 10, 07
သြဂုတ် 30, 2012 မှာ 4: 38 AM
စာရင်းအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ နာမည်အချို့သည်လုံးဝအသစ်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်ကိရိယာအသစ်တစ်ခုကိုသိခွင့်ရသည့်အတွက်အလွန်ပင်ကောင်းမွန်သည်။ ငါဆက်သွယ်ရေး, စီမံကိန်းကိုစီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်အလွန်ကြီးစွာသောဖြစ်သော Comindware တာဝန်စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်, ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။
6:2012 pm တွင်စက်တင်ဘာ 12, 55 မှာ
Discuzz - ထပ်ထည့်လိုက်တာက Geekwire မှာကျွန်တော်ဖတ်ခဲ့တဲ့။ Microsoft ကသူတို့ကိုစိတ်ဝင်စားနေသလိုပဲ!
စက်တင်ဘာ 17, 2012 မှာ 11: 35 AM
17:2013 pm တွင်ဇူလိုင်လ 5, 08
17:2013 pm တွင်ဇူလိုင်လ 6, 45
18:2013 pm တွင်ဇူလိုင်လ 9, 33
ကျေးဇူးတင်ပါသည် @sahilparikh: disqus
7:2013 pm တွင်အောက်တိုဘာ 1, 22
ကြီးမြတ်စာရင်း။ Clinked ကအဆိုးဆုံးနာမည်အတွက်မဲပေးပြီး Jive ကအဆိုးဆုံးဗွီဒီယိုကိုရတယ်။
ဒီဇင်ဘာ 7, 2013 မှာ 10: 31 AM
ဒီဇင်ဘာ 7, 2013 မှာ 10: 32 AM
မတ်လ 25, 2014 မှာ 5: 21 AM
သင်လူကြိုက်အများဆုံးအခမဲ့ပလက်ဖောင်းများဖြစ်သော Bitrix24 နှင့် Asana ကိုမေ့ခဲ့သည်